Oroka no Niantombohany: Miteraka Adihevitra Momba Ny Fankahalana Ireo Olona Mitovy Fananahana Miaraka Ny Mpilalao Baolina Kitra Iray any Brezila · Global Voices teny Malagasy
Oroka no Niantombohany: Miteraka Adihevitra Momba Ny Fankahalana Ireo Olona Mitovy Fananahana Miaraka Ny Mpilalao Baolina Kitra Iray any Brezila
Voadika ny 15 Septambra 2013 10:13 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, English, Español, Svenska, 繁體中文, 简体中文, عربي, Português
[Mitondra any amin'ireo vohikala amin'ny teny Portiogey avokoa ireo rohy rehetra raha tsy misy fanamarihana manokana.]
Herinandro taorian'ny nifanorohan'ireo atleta Rosiana Kseniya Ryzhova sy Tatyana Firova ho fankalazana ny Tompon-dakan'ny Atletisma Erantany tany Môskoa ary koa ny fandraisan'ilay tompon-dakan'ny “saut à la perche” intelo nisesy, Yelena Isinbayeva, fitenenana ho miandany amin'ny lalàna fandraràna ny fanambadian'olona mitovy fananahana any Rosia, izay niverenany làlana taty aoriana, dia fotoanan'i Brezila indray izao ny miresaka ny fankahalàna ny fiarahan'olona mitovy fananahana amin'ny alalan'ny fanatanjahantena.
Namoaka sary tao anaty aterineto ny mpilalao baolina kitra ao amin'ny Ekipa Breziliana Corinthians [en], Emerson Sheik [en], izay niteraka fifandirana tao anatin'ireo tambajotra sosialy Breziliana. Anatin'ilay sary, mankalaza ny fandresen'ny ekipany farany teo ilay laharana faha-10 ao amin'ny Corinthians amin'ny alalan'ny fanomezany oroka ny namany lahy iray.
Sary nozaraina tao amin'ny Instagram. Tamin'ny fotoana namoahana an'ity lahatsoratra ity, 9.985 ireo olona nitia ity sary iy.
Teo anilan'ilay sary, nanoratra i Sheik:
Tsy maintsy sahisahy ianao raha hankalaza ny finamànana ary tsy matahotra ny mety ho lazain'ireo olona mpitsara ivelany. Tsy maintsy manana fahalalahana tsara ianao raha hankalaza fandresena tahaka izao, tsy ampihambahambàna, miaraka amina namana izay eo foana ho anao.
Oroka iray dia ampy ho an'ny baolina kitra ho toerana hiadian-kevitra mikasika ny fankahalana ireo olona mitovy fananahana miaraka – tontolo iray malaza fa “macho”.
Tsy ela ny fisehoan'ireo tsikera momba an'i Sheik tao anaty aterineto na koa ny fanehoan'izy ireo ny heviny an-dalambe. Vondrona iray an'ireo mpikambana avy ao amin'ny fikambanan'ireo mpankafy ny Camisa 12 no nanao hetsi-panoherana teo ivelan'ny kianja fanbazarantenan'ireo Corinthians, nitaky fialan-tsiny sy fanalàna ilay mpilalao. Nitàna sora-baventy io vondrona io, mirakitra ny teny filamatra “Tsy ekena ireo pelaka” sy “Toerana ho an'ny lehilahy ity” .
Ao amin'ny pejy Twitter ofisialin'izy ireo, nanoratra ny Camisa 12 (@Camisa12oficial):
Tsy ekenay ireo fihetsika maningana izay manimba ny sarin'ny Corinthians sy ny mpanohana azy. Mangataka fanajana an'ireo Ultras izahay! Corinthians ity!
Na izany aza, araka ny fampahatsiahivan'i Wilson Gomes antsika, anatin'ireo tontolo tahaka ny baolina kitra, efa fomba iray hanambaniana sy tsy hanomezan-danja ny fanoherana ny fampiasana fiteny mifandray amin'ny fanambadian'olona mitovy taovam-pananahana. Nanoratra izy:
Na izany aza, hanisy fanavahana aho: Tsy ny orok'i Sheik no zava-dehibe; ny mahaliana dia ny resabe aterak'io oroka io. Manana oha-pitenenana avy amin'ny “anthropologue” sosialy aho izay hazoniko mafy: mahafantatra zavatra maro mikasika ny kolontsaina iray ianao avy amin'ny lisitr'ireo zavatra manafintohina azy.
Manao hetsi-panoherana ireo mpanakanto amin'ny alalan'ny fifanorohana ho an'ilay hetsi-panentanana #SheikTamoJunto.
Etsy ankilany, feno hafatra fanohanana ho an'ilay mpilalao ny Aterineto.
Tsy ela dia niparitaka tany anaty aterineto ny fakàn-tahaka an'io “kissathon” [en] io ho fanohanana an'i Sheik, izay natao nandritra ny hetsi-panentanana enti-manohitra ny fankahalana ireo olona mitovy nefa miaraka, tany amin'ny Kaomisiona Breziliana ho an'ny Zon'olombelona[en].
Nanomboka tamin'ny sary (etsy ankavanana) navoakan'ireo mpirahalahy Fernando sy Gustavo Anitelli, izay mpikambana avy ao amin'ny O Teatro Mágico (Ilay Teatra Mahagaga).
Taty aoriana dia nasongadina tao amin'ny Blog do Rovai izany hevitra izany, nahatonga izany hiparitaka eo ambanin'ireo tenifototra #Sheiktamojunto (Sheik iray isika) sy #vaicurintia (alefa ry corinthian).
Avy eo dia nanomboka namoaka ny sary fanohanany manokana ireo mpampiasa Twitter :
Niparitaka tao amin'ireo tambajotra sosialy ireo sary maneho fanohanana. Ity iray ity dia mivaky hoe “Samy mpankafy ny Corinthians avokoa izahay ato anatin'ity fianakaviana ity, fa tsy misy na iray aza aminay tsy mahay mandefitra!”. Sary: Alex Capuano/Facebook
Nampahatsiahy ny vanim-potoanan'ny Demokrasian'ny Corinthians [en] ny bilaogy Impedimento (Fisakanana), vanim-potoana izay notarihanà vondron'ireo mpilalao ao amin'ny Corinthians nirotsaka anatin'ny politika ary noraisina ho “hetsika ideolojika lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny baolina kitra Breziliana”:
Na dia tsy misy antony ara-politika aza ilay hetsika, dia hetsi-panoherana ilay orok'i Sheik, hetsika fihokoana, izay mampahatsiahy an'ireo Demokrasian'ny Corinthians. Eny, tsy zava-dehibe izany, nefa mbola tsy nahita mpilalao baolina kitra Breziliana nitsangana manoloana ny antsoin'ny mpilalao tenany mihitsy ho “fitsarana ivelany misy eo amin'ny baolina kitra” isika, tahaka ny nohamarinin'i Sheik androany manoloana ireo akon'ny hetsika fanehoany ny fitiavany.
Lasa hetsi-panoherana anatin'ny ady amin'ny fankahalana ireo olona mitovy taovam-pananahana nefa miaraka ny sarin'ny orok'i Emerson Sheik, anatina tontolo izay mbola ahitana firenena 76 mandray ho heloka ny fitiavan'olon-droa mitovy [en]. Na ihany koa, tahaka ny nolazain'ny mpitoraka bilaogy Fabio Chiorino, “oroka kely ho anà lehilahy ity, ary dingana lehibe ho an'ny baolina kitra Breziliana.”